किन घट्दै छन् नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता ? « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
किन घट्दै छन् नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ता ?
करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा चार करोडभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण भएपछि दूरसञ्चार पहुँच तथ्याङ्कमा शत प्रतिशतभन्दा बढी देखिन थालेको धेरै भयो । सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धामा सेवा प्रदायकले सिमकार्ड वितरणलाई बजार हिस्सा मान्न थालेपछि पछिल्लो एक वर्षयता मासिक तीन लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण हुन थाल्यो ।
तर सिमकार्ड बिक्रीमा दिनानुदिन बढ्दो ग्राफ यतिबेला भने तल झर्न थालेको छ । आश्चर्य त के छ भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको यसअघि मासिक ग्राहक बढ्ने दरभन्दा घट्ने दर दोब्बरभन्दा बढी छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार पुसपछि जीएसएम ग्राहकको कुल सङ्ख्यामा व्यापक गिरावट आउन थालेको हो । पुसमा जीएसएम ग्राहकको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै बढी अर्थात् चार करोड पाँच लाख ९२ हजार पुगेपछि माघमा एकैपटक करिब १६ लाखले घटेर तीन करोड ९१ लाख १३ हजार पुग्यो । त्यतिबेला ग्राहक गुमाउने सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम मात्रै थियो ।
यसको अर्थ टेलिकमले वैशाख र जेठमा करिब पाँच लाख र एनसेलले चार लाख गरेर नौ लाख ग्राहक गुमाउन पुगे । तेस्रो प्रतिस्पर्धी स्मार्ट टेलिकमको जेठसम्म ग्राहक सङ्ख्या भने २१ लाख ४१ हजार पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पुसमा मोबाइलको पहुँच कुल जनसङ्ख्याभन्दा ४३।२२ ले बढी रहेकामा जेठसम्म आइपुग्दा पहुँच १९।३२ प्रतिशतले घटेर १२३।९० कायम भयो ।
नेपालमा सिमकार्ड जुनसुकै सङ्ख्यामा वितरण भए पनि सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या भने जनसङ्ख्याको ७० देखि ८० प्रतिशतबीचमै रहेको प्राधिकरण अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । वर्षभरको सक्रिय उपयोगको समय (भीएलआर) हेर्दा ८० प्रतिशत नजिक मात्रै सिमकार्ड सक्रिय देखिन्छन्, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले सिमकार्ड बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै यसको दुरुपयोग रोक्न एक व्यक्तिले एउटा सेवा प्रदायकको दुईभन्दा बढी सिमकार्ड लिन नपाउने नियम लागू गरेको छ । त्यस्तै आफ्नो नाममा रहेको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्न पनि प्राधिकरणले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।